Maleeshiyada al-Shabaab oo shan askari oo booliis ah ku dishay gobolka Waqooyi Bari Kiinya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeMaleeshiyada al-Shabaab oo shan askari oo booliis ah ku dishay gobolka Waqooyi Bari Kiinya
June 20, 2016 Abdi Omar Bile Home 0
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa shan askari oo booliis ah ku dishay gobolka xuduuda ee ku yaala Waqooyiga-bari ee dalka Kiinya maanta oo Khamiis ah, sida uu sheegay guddoomiye gobol.
Ma jirto bayaan deg deg ah oo al-Shabaab kasoo baxay, taasoo weeraro is-xig-xiga oo dhiig ku daatay ka samaysay gudaha Kiinya, iyagoo sheegay in ay sii wadayaan weeraradooda ilaa xukuumada Nayroobi ay kala baxayso ciidamadeeda gudaha Soomaaliya.
“Waxaanu cambaaraynaynaa weerarka al-Shabaab ee Diimu saakaydan, shan ciidanka booliska ah ayaa lagu dilay,” guddoomiyaha deegaanka Mandhera, Cali Roba ayaa sidaa ku yiri Twitter-kiisa.
Al-Shabaab ayaa horey weeraro ula beegsatay gobolka Mandheera ee waqooyi-bari Kiinya.
Washington-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa shalay oo Khamiis ahayd ka codsaday Yuhuuda in ay joojiyaan dhismaha deegaameysiga cusub, iyaga oo sheegay in dhismayaasha cusub ee ay Yuhuudu ka wadaan Daanta Galbeed ay waxyeeli doonto dadaalada nabada [...]